URiky Rick uyinyathele emsileni kuCassper Nyovest
KWAKUSEMNANDI phakathi kukaRiky Rick noCassper Nyovest Isithombe:INSTAGRAM
KUFUFUSA impi yamazwi komrepha ebebengamathe nolimu, uRefilwe "Cassper Nyovest" Phoolo (29) waseMafikeng noRikhado "Riky Rick" Makhado (32) waseMlazi emuva kokuba uRiky Rick ezame ukulamula ingxabano kaCassper nembangi yakhe, uKiernan "AKA" Forbes (32) waseCape Town, ebisezinkundleni zokuxhumana.
Zizokhunjulwa lezi zinsizwa zipikana ezingomeni eziningi okubalwa kuzo ethi Le Mpitse nethi Stay Shining ngesikhathi zisadla ogqokweni olulodwa. URiky uyinyathele emsileni kuCassper ngokuthi athi ingxabano yakhe no-AKA seyiphelelwe ngumsoco, ngakho kufanele ifinyelele esiphethweni.
Uthe ayakhi kunalokho icekela phansi usiko lomculo we-hip hop/rap. Wakubeka kwacaca ukuthi akekho acheme naye kulaba futhi yena akakunameli ukubabona beklwebhana njengamakati ezinkundleni zokuxhumana.
"Le mpi yamazwi phakathi kukaCassper no-AKA...ingajatshulelwa kuTwitter kodwa iyinto iningi lomrepha eliyihlabe inhlali ngayo ngoba icekela phansi isiko (lomculo we-rap)," kubhala uRiky kuTwitter.
Kube sekungenelela noGemin Major, kwabe sekuziphendulela uCassper kuRiky noGemin Major wathi bakhuluma ngoba izinto zingasamhambeli kahle u-AKA. "Manje sekuyikhathi sokuthi nimvikele. Benikuphi nonke ngesikhathi u-AKA engithuka ngabazali bami kuTwitter? Nathula nonke! Hambani nonke niyofa! Nonke...Ingxoxo yomuntu omkhulu yaphela ngesikhathi lento edakwa izidakamizwa ithuka ubaba nomama. Angiphendulanga ngoba ngangisayina isivumelwano esikhulu njengenhlalayenza. Ningasho enikuthandayo ngoba kwakungebona abazali benu abachwenswa kwi-timeline. Kwakungabami..."
Uqhubekile uCassper wathi yena ungowaseMontshiwa eDithobane. "Angisabi lutho engesiye uNkulunkulu. Ulula kabi. Ngenza into yami futhi ngiyenza kahle," kuphendula uCassper kuTwitter.
Kuzokhunjulwa ukuthi impi yamazwi phakathi kukaCassper no-AKA seyinesikhathi iqhubeka kangangoba uCassper wake wasola u-AKA ngokumqandula ngempama kwenye i-night club ngo2015 kodwa u-AKA waphika waze wagingqika phansi.
UCassper wakugcizelela ukuthi senzeka lesi sigameko futhi yena wayesefuna ukumudla luhlaza u-AKA ukube akalanyulwanga. Muva nje u-AKA usanda kuthuka uCassper ngabazali bakhe, okuyisenzo u-AKA abuye wazisola ngaso engxoxweni ayenayo noSlikour weSkwatta Kamp kwi-Instagram Live.
U-AKA wabiza abazali bakaCassper ngezehluleki njengoba bamyekelela walaxaza isikole kaGrade 10. Kwaze kwaphakanyiswa ukuthi labo mrepha abavele bangene eringini ukuze lempi yomlomo iqedwe ngenqindi kodwa babamba bayeka, wena owabona ikhehla liganwa, kwaze kwafika ukuvalwa thaqa kwezwe.